Pepto-Bismol vs. Tums: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည့်အရာ - မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း | ဇန္နဝါရီလ 2022
ပြင်းထန်သောအားကစား မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ နှိပ်ပါ မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း သတင်း၊ ဆီးဂိမ်း ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း ဖျော်ဖြေရေး ကုမ္ပဏီ, ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုန်ပစ္စည်း ကျန်းမာရေး ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း
အဓိက >> မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း >> Pepto-Bismol vs. Tums: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည့်အရာ
သငျသညျပျော့အစာခံစားခဲ့ရပါတယ်ရှိမရှိသို့မဟုတ် ရံဖန်ရံခါပူလောင်ခြင်း သငျသညျဖြစ်ကောင်းတစ်ချိန်ချိန် Pepto-Bismol နှင့် Tums ဖြတ်ပြီးလာပါတယ်။ ဤဆေးများသည်ပူလောင်ခြင်းအတွက်အသုံးများသောဆေးဝါးများမဟုတ်သော (OTC) ဆေးနှစ်မျိုးဖြစ်သည်။
Pepto-Bismol နှင့် Tums နှစ်မျိုးလုံးသည် antacid သက်ရောက်မှုများရှိပြီးအစာအိမ်အက်စစ်ပျက်စေရန်ကူညီသည်။ စပ်အစားအစာများစားပြီးနောက်သို့မဟုတ်အစာအိမ်အက်ဆစ်များလွန်းခြင်း၊ အကြီးစားအစားအစာများ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ရင်ဘတ်နှင့်ဝမ်းဗိုက်အထက်ပိုင်းတွင်လောင်ကျွမ်းခြင်းသို့မဟုတ်အဆင်မပြေမှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ Antacids သည်ဤရောဂါလက္ခဏာများသက်သာစေရန်ကူညီနိုင်သည်။
Pepto-Bismol နှင့် Tums အကြားအဓိကကွာခြားချက်များကဘာလဲ။
Pepto-Bismol သည်ဘစ်စမတ် subsalicylate အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ subsalicylate သည်အရည်နှင့် electrolyte များဆုံးရှုံးမှုကိုဆန့်ကျင်သော antisecretory သက်ရောက်မှုများရှိပြီးဘစ်စမတ်သည်ဝမ်းလျှောစေသည့်ဘက်တီးရီးယားအချို့ကိုရောဂါပိုးမွှားတိုက်ဖျက်နိုင်သည်။ Bismuth subsalicylate သည်အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းနှင့်ပတ်သက်သောရောင်ရမ်းမှုများကိုပြုလုပ်သည်။ ဤအကြောင်းများကြောင့် Pepto-Bismol ကို antacid or antidiarrheal agent အဖြစ်သုံးနိုင်သည်။
Pepto-Bismol ကိုခံတွင်းအရည်အဖြစ်တွေ့ရှိရသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ပုံမှန်တက်ဘလက်များနှင့်ဝါးစားနိုင်သောတက်ဘလက်များတွင်လည်းပါရှိသည်။ Pepto-Bismol ပုံစံအများစုတွင်ဘစ်စမတ် subsalicylate များပါ ၀ င်သော်လည်းကလေး၏ Pepto-Bismol တွင်ကယ်လစီယမ်ကာဗွန်နိတ်ပါရှိသည်ကိုသတိပြုပါ။
Tums သည်ကယ်လစီယမ်ကာဗွန်နိတ်အတွက်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အစာအိမ်အက်ဆစ်ကိုတိုက်ရိုက်အာနိသင်လျော့စေသောအစွမ်းထက် antacid အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ကယ်လ်ဆီယမ်ကာဗွန်နိတ်အစာအိမ်အက်ဆစ်နှင့်ဓာတ်ပြုပြီးကယ်လစီယမ်ကလိုရိုက်၊ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နှင့်ရေကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အစာအိမ်ရှိကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လွှတ်မှုအလွန်များခြင်းကြောင့် Tums ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာဝမ်းဗိုက်ချို့တဲ့ခြင်းနှင့်ဓာတ်ငွေ့ (အူများ) ။
Pepto-Bismol နှင့်မတူဘဲ Tums ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်စွမ်းအားနှင့်အပိုစွမ်းအားဖြင့်ဝါးနိုင်သောတက်ဘလက်တစ်ခုအဖြစ်တွေ့ရှိရသည်။ Tums ကို ၁၂ နှစ်အထက်ကလေးများကပုံမှန်အားဖြင့်အသုံးပြုကြသည်။ သို့သော် Tums ကလေး၏မူကွဲများကိုလည်းရရှိနိုင်သည်။ ကလေးသူငယ်များတီumsအချို့ဗားရှင်းများပါရှိသည် ချစ်သူ ဓာတ်ငွေ့သက်သာစေရန်။
RELATED: Pepto-Bismol အသေးစိတ် | ကလေးများ Pepto-Bismol အသေးစိတ် | Tums အသေးစိတ်
Pepto-Bismol နှင့် Tums အကြားအဓိကကွဲပြားခြားနားမှု
Antidiarrheal အေးဂျင့် Antacid
ယေဘုယျနာမည်ကဘာလဲ? ဘစ်စမတ် subsalicylate ကယ်လစီယမ်ကာဗွန်နိတ်
မည်သည့်ပုံစံ (များ) ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးထဲသို့ဝင်သနည်း။ ခံတွင်းရပ်ဆိုင်းမှုအရည်
စံသောက်သုံးသောကဘာလဲ? လိုအပ်သောမိနစ် ၃၀ မှ ၆၀ တိုင်းတွင်ဇွန်း ၂ ခွက်သို့မဟုတ် ၂၆၂ မီလီဂရမ် (တစ်ယူနစ်လျှင် ၅၂၄ မီလီဂရမ်) ပါသော ၂ ပြားပါရှိသည်။ တစ်နေ့လျှင် 8 ဆေးများအများဆုံး။ လက္ခဏာများအတွက်လိုအပ်သကဲ့သို့2မှ4ဝါး 750 မီလီဂရမ်တက်ဘလက်။ တစ်နေ့လျှင်အများဆုံးဆေးပြား ၁၀ လုံး။
ပုံမှန်ကုသမှုဘယ်လောက်ကြာမလဲ ရံဖန်ရံခါကာလတိုအသုံးပြုမှုအတွက်။ မိမိကိုယ်ကိုကုသခြင်းသည် ၁၄ ရက်ထက်မပိုသောကြာရှည်စွာသုံးစွဲသင့်သည်။ ရံဖန်ရံခါကာလတိုအသုံးပြုမှုအတွက်။ မိမိကိုယ်ကိုကုသခြင်းသည် ၁၄ ရက်ထက်မပိုသောကြာရှည်စွာသုံးစွဲသင့်သည်။
ဒီဆေးကိုဘယ်သူကပုံမှန်သုံးသလဲ။ လူကြီးများနှင့်ကလေးများ 12 နှစ်နှင့်အထက် လူကြီးများနှင့်ကလေးများ 12 နှစ်နှင့်အထက်
Pepto-Bismol စျေးနှုန်းသတိပေးချက်များကို sign up လုပ်ပါနှင့်စျေးနှုန်းပြောင်းလဲသည့်အခါထွက်ရှာ!
Pepto-Bismol နှင့် Tums မှကုသသောအခြေအနေများ
Pepto-Bismol သည်အက်စစ် reflux နှင့် GERD (gastroesophageal reflux disease) လက္ခဏာများဖြစ်နိုင်သည့်အပူလောင်ခြင်းကိုကုသရန် FDA ၏အတည်ပြုချက်ဖြစ်သည်။ Pepto-Bismol သည်အက်စစ်အစာကိုကုသနိုင်သည်။ ၎င်းတွင်ဝမ်းဗိုက်အဆင်မပြေခြင်း၊ ဖောင်းပွခြင်းနှင့်ပျို့အန်ခြင်းကဲ့သို့သောလက္ခဏာများပါဝင်သည်။ ထို့အပြင် Pepto-Bismol ကိုကုသနိုင်သည် ခရီးသွားဝမ်းလျှော ရံဖန်ရံခါ ၀ မ်းပျက် ၀ မ်းလျှောခြင်း၊ Helicobacter pylori ။ အတွက်အသုံးပြုတဲ့အခါ အိပ်ချ် pylori ကူးစက်မှုကိုကုသရန်ဘစ်စမတ် subsalicylate ကိုအခြားပiotိဇီဝဆေးများဖြင့်သောက်သည်။
Tums သည်အပူလောင်ခြင်းနှင့်အစာကြေခြင်းကိုကုသရန်တံဆိပ်တပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ဖောင်းပွခြင်းနှင့်ဝမ်းဗိုက်အဆင်မပြေခြင်းကဲ့သို့သောရောဂါလက္ခဏာများကိုသက်သာစေရန်အစာအိမ်ရှိအက်ဆစ်ပမာဏကိုလျော့နည်းစေပြီးလျော့နည်းစေသည်။ အစာခြေခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောဓာတ်ငွေ့နှင့်အူသိမ်အူမရောဂါလက္ခဏာများသက်သာစေရန်တစ်ခါတစ်ရံကယ်လစီယမ်ကာဗွန်နိတ်ကို simethicone နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Pepto-Bismol သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင် calcium carbonate - Tums တွင်ပါဝင်သောပါဝင်မှုများပါဝင်သောကြောင့်၎င်းသည်အထုပ်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းကိုစစ်ဆေးပြီးသင့်တော်သောထုတ်ကုန်ကိုသင်သေချာစေရန်သင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုတောင်းဆိုရန်အရေးကြီးသည်။
အခြေအနေ Pepto-Bismol Tums
အစာ ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
ဝမ်းလျှောခြင်း ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး
Pepto-Bismol သို့မဟုတ် Tums သည်ပိုမိုထိရောက်ပါသလား။
လက်ရှိတွင် Pepto-Bismol နှင့် Tums တို့ကိုတိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်ထားသောပြည့်စုံသောပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များမရှိပါ။ လေ့လာရေး ဘစ်စမတ် subsalicylate နှင့်ကယ်လစီယမ်ကာဗွန်နိတ်တို့သည်အက်စစ် - လျှော့ချနိုင်သောသက်ရောက်မှုများကြောင့်အစာကိုကုသရန်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
Pepcid (famotidine) နှင့် Zantac (ranitidine) တို့ကဲ့သို့ H2 blockers များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Tums သည်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာအလုပ်လုပ်ပြီးအချိန်တိုတောင်းသောရောဂါလက္ခဏာများကိုသက်သာစေသည်။ Alka-Seltzer (sodium bicarbonate) နှင့် Maalox (aluminium hydroxide / magnesium hydroxide) ကဲ့သို့သောအခြား antacids များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက Tums သည်အနည်းငယ်နှေးကွေးသောလုပ်ဆောင်မှုရှိသော်လည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုမှာကြာရှည်နိုင်သည်။
Pepto-Bismol သည် ၀ မ်းလျှောရောဂါကုသခြင်းကဲ့သို့သောအခြားအသုံးပြုမှုများအတွက်ပိုမိုထိရောက်သည် အိပ်ချ် pylori ရောဂါကူးစက်မှု။ ဘစ်စမတ် subsalicylate ကိုကူညီရန်ပြသခဲ့သည် peptic အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေ အထူးသဖြင့် metronidazole နှင့် clarithromycin ကဲ့သို့သောပantibိဇီဝဆေးများနှင့်ပေါင်းစပ်သည့်အခါဘက်တီးရီးယားပိုးများတိုက်ဖျက်နေစဉ်။
ရံဖန်ရံခါပူလောင်ခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးကုသမှုနည်းလမ်းအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်ဆွေးနွေးပါ။ အက်စစ် reflux ရောဂါသို့မဟုတ် GERD စသည့်ပြင်းထန်သောရင်ပူခြင်းများဖြစ်သည့် Proton pump inhibitors (PPIs) ကဲ့သို့သောအခြားဆေးဝါးများလိုအပ်နိုင်သည်။ PPIs အဖြစ်တံဆိပ်ကပ်မူးယစ်ဆေးဝါးများပါဝင်သည် Prevacid (lansoprazole) နှင့် Prilosec (omeprazole) ။
RELATED: Alka-Seltzer အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
Tept vs. Pepto-Bismol ၏လွှမ်းခြုံမှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်နှိုင်းယှဉ်မှု
Medicare နှင့်အာမခံအစီအစဉ်များသည် Pepto-Bismol နှင့် Tums တို့ကဲ့သို့ဆေးဝါးများကြိုတင်မှာယူမှု (OTC) ကိုရံဖန်ရံခါဖုံးအုပ်ထားသည်။ OTC မူးယစ်ဆေးဝါး၏ဆေးညွှန်းဗားရှင်းရရှိနိုင်သည့်အခြေအနေများတွင်အာမခံအစီအစဉ်များသည်၎င်းကိုဖုံးလွှမ်းရန်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
Pepto-Bismol နှင့် Tums တို့၏ပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ်သည်သင်သွားသောဆေးဆိုင်ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။ သို့သော်ဤမူးယစ်ဆေးဝါးများအတော်လေးစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ဆရာ ၀ န်တစ် ဦး ဦး ကသတ်မှတ်ထားပါကသင်သည် SingleCare Pepto-Bismol ကူပွန်သို့မဟုတ် SingleCare Tums ကူပွန်ကိုပိုမိုသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။
စံသောက်သုံးသော လိုအပ်သည့်အချိန်မိနစ် ၃၀ မှ ၆၀ တိုင်းတွင် ၂၆၂ မီလီဂရမ်ဆေးပြား ၂၆၂ မီလီဂရမ် လိုအပ်လျှင်2မှ4500 မီလီဂရမ်သို့မဟုတ် 750 မီလီဂရမ်ဆေးပြား
ပုံမှန် Medicare copay N / A N / A
SingleCare ကုန်ကျစရိတ် $5+ $4+
Tums vs. Pepto-Bismol ၏ဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
Pepto-Bismol သည်ထိုင်ခုံသို့မဟုတ်လျှာ၏အမဲအရောင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘစ်မတ် subsalicylate သည်ဘစ်စမတ်ဆာလ်ဖိုက်ဒြပ်စင်ကိုအနက်ရောင်ပါ ၀ င်မှုဖြစ်စေရန်အတွက်အနည်းငယ်သောဆာလဖာနှင့်ဓာတ်ပြုနိုင်သည်။ မှောင်မိုက်သောထိုင်ခုံသည်သွေးကြောနှင့်မရောထွေးနိုင်သော်လည်း (ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခု) ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသည်ယာယီသာဖြစ်ပြီးအန္တရာယ်ကင်းသည်။ အချို့လူများက Pepto-Bismol ကိုသောက်သုံးပြီးနောက်မှာလည်းဝမ်းချုပ်တာကိုအစီရင်ခံကြတယ်။
Tums ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ belching နှင့် gas (flatulence) တို့ဖြစ်သည်။ Tums သည်ဝမ်းချုပ်ခြင်းနှင့်ပါးစပ်ခြောက်သွေ့ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
ရှားပါးသော်လည်းပြင်းထန်သော Pepto-Bismol အကျိုးသက်ရောက်မှုတွင် tinnitus သို့မဟုတ်နား၌အစဉ်မပြတ်အူသံများပါ ၀ င်နိုင်သည်။ အခြားဒြပ်ထု၏အခြားဆိုးရွားသည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာကယ်လစီယမ်ဓာတ်မြင့်မားခြင်းလက္ခဏာများပါဝင်သည်။ hypercalcemia ) ထိုကဲ့သို့သောအားနည်းချက်, အရိုးနာကျင်မှုနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်အဖြစ်။
အနက်ရောင်သို့မဟုတ်မှောင်မိုက်သောမစင် ဟုတ်တယ် * မဟုတ်ဘူး *
အနက်ရောင်သို့မဟုတ်မှောင်မိုက်လျှာ ဟုတ်တယ် * မဟုတ်ဘူး *
အခွံခွာခြင်း၊ မဟုတ်ဘူး * ဟုတ်တယ် *
ဝမ်းချုပ်ခြင်း ဟုတ်တယ် * ဟုတ်တယ် *
ပါးစပ်ခြောက် မဟုတ်ဘူး * ဟုတ်တယ် *
၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်သောဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများစာရင်းအပြည့်အစုံမဖြစ်နိုင်ပါ။ ပိုမိုလေ့လာရန်သင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူကို ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။
ရင်းမြစ် - NIH ( Pepto-Bismol ), NIH ( Tums )
Tums vs. Pepto-Bismol ၏မူးယစ်ဆေးဝါး interaction က
Pepto-Bismol သည် Aspirin နှင့်အတူတူဖြစ်သောဆေးများစွာနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ဘစ်စမတ် subsalicylate သည် warfarin နှင့်အဆက်အသွယ်ပြုခြင်းဖြင့်သွေးထွက်ခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ probenecid ကဲ့သို့သော anti-gout agent များနှင့်ခေါ်ဆောင်သွားပါကဘစ်စမတ် subsalicylate သည် gout anti-gout ဆိုးကျိုးများကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်။ Pepto-Bismol သည် tetracycline နှင့် quinolone ပantibိဇီဝဆေးများ၏စုပ်ယူမှုနှင့်ထိရောက်မှုကိုလည်းလျော့နည်းစေသည်။
Tum သည် tetracycline နှင့် quinolone ပantibိဇီဝဆေးများ၏သက်ရောက်မှုများကိုလျော့နည်းစေသည်။ ကယ်လ်စီယမ်စုံလုံသည် itraconazole ကဲ့သို့သော antifungals များနှင့်လည်းပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ အချို့သောပiotိဇီဝဆေးများ၊ ရောဂါပိုးမွှားတိုက်ဖျက်ဆေးများနှင့်သံဖြည့်စွက်ဆေးများကိုကယ်လ်ဆီယမ်ကာဗွန်နိတ်မသောက်မီသို့မဟုတ်ပြီးနောက်အနည်းဆုံး ၂ နာရီခန့်ရှောင်ရှားသင့်သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး မူးယစ်ဆေးအတန်း Pepto-Bismol Tums
Levofloxacin ပိဇီဝဆေး ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Ketoconazole antifungals မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
Warfarin Antikoagulants ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး
Probenecid ရေတံခွန် ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး
ferric citrate သံ မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
Pepto-Bismol နှင့် Tums ၏သတိပေးချက်များ
Aspirin ထုတ်ကုန်များကိုအထိခိုက်မခံသူများသည် Pepto-Bismol နှင့်အခြား salicylate မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုမသောက်သုံးသင့်ပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ထိုကဲ့သို့သောအဖုအဖြစ် hypersensitivity တုံ့ပြန်မှု, အလားအလာဆိုးရွားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
Pepto-Bismol ကိုအသက် ၁၂ နှစ်အောက်ကလေးများမှရှောင်ရှားသင့်သည်။ ရေကျောက်သို့မဟုတ်တုပ်ကွေးရောဂါမှပြန်လည်နာလန်ထူလာကြသောကလေးများသည်အန္တရာယ်ပိုများလာသည် Reye ရဲ့ရောဂါ ဘစ်စမတ် subsalicylate ယူပြီးပြီးနောက်။ အထူးသဖြင့်အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါရှိသူများအတွက်အလွန်ရှားပါးသောအခြေအနေများတွင် Pepto-Bismol သည် neurotoxicity ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အာရုံကြောအဆိပ်အတောက်လက္ခဏာများနှင့်လက္ခဏာများတွင်တုန်ခါမှု၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများ၊
Tums တွင်ကယ်လစီယမ်ကာဗွန်နိတ်ပါဝင်သောကြောင့်အခြားကယ်လစီယမ်ပါဝင်သောထုတ်ကုန်များနှင့်၎င်းကိုရှောင်ရှားသင့်သည်။ ပြင်းထန်သောဖြစ်ရပ်များတွင်ကယ်လစီယမ်အလွန်များခြင်းသည်ကျောက်ကပ်ကိုပျက်စီးစေခြင်း၊ အရိုးများကိုအားပျော့စေခြင်းနှင့် ဦး နှောက်နှင့်နှလုံးတို့၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။
Pepto-Bismol သို့မဟုတ် Tums ကိုသောက်နေစဉ်တွင်သတိထားရမည့်အခြားကြိုတင်ကာကွယ်မှုများအတွက်သင်၏ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်သူကိုဆက်သွယ်ပါ။
Tept vs. Pepto-Bismol နှင့်ပတ်သက်ပြီးမကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ
Pepto-Bismol သည်ဘစ်စမတ် subsalicylate ပါ ၀ င်သော over-the-counter ဆေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပျော့ညံ့သော၊ ခဏခဏမပူလောင်ခြင်း၊ အစာကြေခြင်းနှင့် ၀ မ်းလျှောခြင်းတို့ကိုကုသရန်အသုံးပြုသည်။ ဘစ်စမတ် subsalicylate ကိုလည်းကုသရန်အတည်ပြုသည် အိပ်ချ် pylori အခြားပiotိဇီဝဆေးနှင့်အတူအသုံးပြုသည့်အခါရောဂါကူးစက်မှု။ Pepto-Bismol ကိုပါးစပ်ဆိုင်းထိန်းစနစ်၊ ပါးစပ်ဆေးပြားနှင့်ပါးစပ်ဝါးဆေးပြားတို့တွင်ရရှိနိုင်သည်။
Tums သည်ကယ်လစီယမ်ကာဗွန်နိတ်အတွက်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရံဖန်ရံခါအပူလောင်ခြင်းနှင့်အစာကြေခြင်းကိုကုသရန်အသုံးပြုသည်။ Tums ကိုပုံမှန်စွမ်းအားနှင့်ပိုမိုအားကောင်းသောဝါးဆေးများတွင်ရရှိနိုင်သည်။
Pepto-Bismol နှင့် Tums အတူတူလား?
Pepto-Bismol နှင့် Tums သည်မတူညီပါ။ သူတို့ကကွဲပြားခြားနားသောတက်ကြွပါဝင်ပစ္စည်းများဆံ့နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဖော်မြူလာအတွက်လာကြ၏။ သို့သော်အချို့ဗားရှင်းများတွင် Tums တွင်တူညီသောတက်ကြွစွာပါဝင်သော calcium carbonate ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ သင်ရှာနေသည့်ပါဝင်ပစ္စည်းများပါ ၀ င်မှုရှိမရှိသေချာစေရန် ၀ ယ်ယူခြင်းမပြုမီမူးယစ်ဆေးဝါး၏တံဆိပ်ကပ်စစ်ဆေးပါ။
Pepto-Bismol သို့မဟုတ် Tums ပိုကောင်းပါသလား
Pepto-Bismol နှင့် Tums နှစ်မျိုးလုံးသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ရင်ပူခြင်းသို့မဟုတ်အစာမကြေခြင်းလက္ခဏာများကိုကုသရာတွင်ထိရောက်သောဆေးများဖြစ်သည်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်အတော်လေးလျင်မြန်စွာအလုပ်လုပ်ပြီးတိုတောင်းသောအချိန်အတွက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ တစ်ခုမှာသကြားပါ ၀ င်မှုနှင့်မလှုပ်မရှားသောပါဝင်ပစ္စည်းများအပြင်၎င်းသည်အရည်သို့မဟုတ်ဝါးစားသည့်တက်ဘလက်တွင်ရှိမရှိပေါ် မူတည်၍ တစ်ခုထက် ပို၍ ဦး စားပေးနိုင်ပါသည်။ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရာတွင်ကုန်ကျစရိတ်သည်လည်းအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်နိုင်သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် Pepto-Bismol သို့မဟုတ် Tums ကိုသုံးလို့ရပါသလား။
Pepto-Bismol သည်ယေဘုယျအားဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအတွက်သွေးထွက်ခြင်းဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကြောင့်အကြံပြုထားခြင်းမရှိပါ။ အကြံပြုထားသောဆေးများဖြင့်အစာရှောင်ခြင်းအတွက်ရံဖန်ရံခါ tums များကိုသောက်နိုင်သည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများသတိထားမိရန်အရေးကြီးသည် ကယ်လစီယမ်စားသုံးမှု သူတို့ကအခြားကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ဗီတာမင်သို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်ယူပြီးစေခြင်းငှါကတည်းက။ သင်ကြုံတွေ့ရပါကသင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူထံမှဆေးကုသမှုခံယူပါ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အပူလောင်ခြင်းသို့မဟုတ်အစာမကြေခြင်း ။
ငါအရက်နှင့်အတူ Pepto-Bismol သို့မဟုတ် Tums ကိုသုံးနိုင်သည်?
Pepto-Bismol သို့မဟုတ် Tums ကိုသောက်နေစဉ်အရက်ကိုရှောင်သင့်သည်။ အရက် may အစာအိမ်၏နံရံယားယံ သို့မဟုတ်အူနှင့် antacids နှင့် antidiarrheal အေးဂျင့်များ၏အလုံးစုံထိရောက်မှုကိုပြောင်းလဲ။
Tums သည် ၀ မ်းနည်းသောအစာအိမ်ကိုကုသရန်အတွက်တတ်နိုင်သော၊ ထိရောက်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Chewable Tums တက်ဘလက်များသည်ငါးမိနစ်အတွင်းစတင်အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးလိုအပ်ပါကလည်းယူနိုင်သည်။ Tums ကိုပျော့ပျောင်းသော၊ ရံဖန်ရံခါပူလောင်ခြင်းနှင့်အစာကြေစေရန်သာအသုံးပြုသင့်သည်။ သင်သည် Tums ကို ၁၄ ရက်ကျော်ပုံမှန်အသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်ဆွေးနွေးပါ။
Pepto Bismol သည် antacid လား။
Pepto-Bismol သည်နို့တိုက်ခြင်းနှင့်အစာမကြေခြင်းလက္ခဏာများကိုသက်သာစေရန်အတွက် antacid သက်ရောက်မှုအနည်းငယ်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ခရီးသွားသူ၏ဝမ်းလျှောခြင်းကိုကုသရန်အတွက်အသုံးပြုသောဆေးတိုက်ကျွေးရေးပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်လည်းအလုပ်လုပ်သည်။ Pepto-Bismol သည်အရည်နှင့်လျှပ်စစ်ဓါတ်ဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်ရန်အစာခြေလမ်းကြောင်း၏နံရံကိုဖုံးအုပ်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။
oxycodone နှင့် hydrocodone တို့သည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်
tylenol တွင်တက်ကြွစွာပါ ၀ င်သောအရာကဘာလဲ